Ndị Achalla Ewere Ọñụ Rie Ji Ọhụụ
Next Article Owerre -Ezukala Emee Emume Ọkụka-Oriri Ji Ọhụụ, Chie Obianọ Echichi
Igbo sị na ọ na-abụ mgbe onye jiri teta, ọ bụrụ ụtụtụ ya, ma sịkwa na Ka ọ dị taa, ọ kpọtụrụ akpọtụ ma zụọ azụọ n'Achalla bụ isi obodo okpuru ọchịchị 'Awka North' nke steeti Anambra na nso-nso a, dịka ya bụ obodo merubèrè mmemme iri ji ọhụụ ya nke ahọ 2019.
Oke mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'obi eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Alex Nwokedị, ma bụrụkwa nke dọtara imirikiti ụmụafọ obodo ahụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu, sitere mpaghara ebe dị iche iche na steeti ahụ wee bịa iji anya ha gbaa ekeresimeesi na ya bụ emume.
N'okwu ya oge ọ na-agọ ọjị na mmemme ahụ, Igwe Nwokedị bunyere Eke kere ụwa ụkpa ekele maka onyinye ndụ, nchekwaba na odudu Ya n'isi ụmụafọ obodo ahụ, steeti Anambra, na ala Nigeria n'izugbe; ma tòkwa ya maka ime ka ha dịrị ndụ kọọ ma wekwa ihe ubi n'ụba n'ahọ a.
Ka ọ na-etòkwa ụmụafọ obodo ahụ na aka na-achị steeti ahụ bụ Gọvanọ Willie Obianọ maka ezi ọrụ mmepe na-aga n'ihu n'obodo Achalla; ya bụ eze ọdịnala kpekwazịrị ka Chineke gaa n'ihu ime ka udo tọrọ àtọ, ahụike, ọganihu na ezi nchekwa gaa n'ihu ịbụ ihe nketa nke obodo ahụ na ụmụafọ ya n'izugbe.
N'okwu nke ha n'otu n'otu, oge ha na-atụrụ eze ọdịnala obodo ahụ mmamma, nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo 'Awka North' na 'South' n'ụlọ ọgbakọ nnọchi anya ala anyị, bụ Maazị Chinedu Ọnwụasọ, na ògbò ya nke na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo 'Awka North' n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, bụ Maazị John Nwokoye, kelere Chineke n'isi obodo Achalla, ma kpeekwa ka Chineke gaa n'ihu iji ogologo ndụ na ahụike wee chọọ eze ọdịnala obodo ahọ na ụmụafọ ọ na-achị mma.
N'akụkụ nke ya, eze ọdịnala obodo Ọmọr dị n'okpuru ọchịchị Ayamelụm, bụ Igwe Chris Chidume kọwara Igwe Nwokedị dịka onye ozi Chineke n'onwe ya jiri aka ya zitere ya bụ obodo, ma kpekwazie ka Chineke gaa n'ihu inye ya amamihe na iji ya kwara ngwaọrụ.
Na mbụ n'okwu ya, onyeisioche otu ndọrọ-ndọrọ APGA n'ala anyị, bụ Maazị Victor Oye, bụ ndị obodo ahụ chibèrè echichi dịka Ọbata Obie n'Achalla kwuru na ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ ga-aga n'ihu n'iwetara ụmụafọ steeti ahụ ezi ọchịchị, na n'ịkwàlite mmepe ime-ime obodo. O kwukwazịrị na ọrụ ga-amalite n'okporo ụzọ dị iche iche na steeti ahụ ngwa-ngwa udummiri sepùrù aka, ma kwe ndị obodo ahụ nkwa na ya bụ ọrụ okporo ụzọ ga-eso rute obodo Achalla aka.
A nọrọ na mmemme ahụ wee gbaa egwu ọdịnala dị iche iche; ma nọrọkwa na ya wee buoro eze ọdịnala ahụ ìhù site n'aka ndị otu dị iche iche n'obodo ahụ, nakwa ndị siri ebe dị iche iche bịa isonye na ya bụ oke emume. A nọkwazịrị na ya gbaa egwu ọdịnala dị iche iche, mee oke oriri na ọñụñụ, ọ kachasị ji a hụrụ ahụ na mmanya ngwọ, ma gosipụtakwa ịma mma nke ọnatarachi na omenala ndị Igbo n'ùjú ya.